A ije site na Villa Borghese | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Rome
Rome Ọ mara mma n'afọ niile, mana dịka ọtụtụ ebe nkiri ya n'èzí, mmiri ma ọ bụ oge mgbụsị akwụkwọ bụ oge kachasị mma iji nwee ọ bestụ zuru oke. Ya mere, mgbe oge oyi a gasị, kedu maka ịga Rome ma jee ije na ya Obodo Borghese?
Ogige, ogige, isi iyi, ọdọ mmiri, ụlọ nke ụdị dị iche iche, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ebe nkiri ndị ọzọ, ị ga-ahụ ihe niile a n'akụkụ Rome.
1 Obodo Borghese
2 Ihe ịga leta na Villa Borghese
Ọ dị ugbu a n'ugwu a na-emegharịbeghị ahịhịa, nke dị n'akụkụ Ugwu Pincio, usoro ihe omimi bidoro nwewe mbido narị afọ nke iri na asaa n'aka Kadịnal Borghese, nwa nwanne Pope Paul V na nnukwu onye nlekọta Bernini, onye ọkpụ ahụ. Ọtụtụ ndị omenkà amaara aha ha rụrụ ọrụ ahụ ka ọ na-erule afọ 1633, obodo ahụ adịla njikere.
N'ime ọkara nke abụọ nke narị afọ XNUMX, a na-akpọ Noble House, taa Borghese Gallery, na Water Games House, taa Carlo Bilotti Museum. Ogige Ubi ahu mekwara udi.
Narị afọ abụọ ka e mesịrị, ọnụ ọgụgụ obodo ahụ toro ma mesịa a ahụkarị bekee ubi. Ná mmalite narị afọ nke XNUMX, ezinụlọ Borhese bara ọgaranya mgbe niile hụrụ ka akụnụba ha na-ama jijiji ma kpebie ire ala ahụ na ọdịnaya ya niile bara uru, nke nyefere ya na Rome City Council, nke mepere ya n'ihu ọha maka ezi.
Ogige ahụ dị ka obi, ọ bụrụ na i si n’eluigwe lee ya, ọ dị n’etiti Piazzale Flaminio, agbata ego na Porta Pinciana. Nwa 80 hekta nke ihe mara mma ị nwere ike ịga na njem nke ihe dị ka elekere abụọ ma ọ bụ karịa ụlọ akụkọ ihe mere eme, ụlọ n'èzí, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ihe ncheta, isi mmiri, ọdọ mmiri, ubi na ọdọ mmiri.
Ozi bara uru maka ịga na Villa Borghese
Site na Termini, buru ụzọ ụgbọ oloko A ma pụọ ​​na Flaminio. Na-eje ije ihe dị ka mita 500 ma nweelarị ohere ịnweta ụlọ. Gbọ ala 88, 490, 495, 160, 910, 52, 53, 628, 926, 223 na 217 na-ahapụkwa gị; na ɔno ne trenee 19, 3 ne 2.
Ogige ahụ na-emeghe malite n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda anyanwụ.
Nbanye bụ n'efu na ị ga-akwụ ụgwọ naanị maka ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ ụlọ ịchọrọ ịga.
Ihe ịga leta na Villa Borghese
La Borghese Osisi Ọ bụ ụlọ ngosi ihe nka nka ị na - agaghị echefu n'ihi na ọ bụ otu n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kacha mma n'ụwa. Nchikota a bu nke Cardinal Borghese, nwa nwanne Paul V bidoro, n’agbata 1576 na 1633. N’ebe a ka ichoputa oru site na Bernini, dị ka ọ bụ onye nlekọta mbụ ya, yana kwa ezigbo uru nke Caravaggio.
Thelọ ahụ nwere okpukpu abụọ. Isi ala nwere ihe niile Ochie ochie na ọ bụ a magburu onwe saịtị dị ka e nwere iberibe site XNUMXst na XNUMXrd narị afọ AD n'etiti ebube ọma echebewo ọkpụkpụ, mosaics na frescoes. Floorlọ elu nwere ụlọ ọrụ nwere ọrụ ndị bịanyere aka na ya Rubens, Bottticelli, Raphael na Titian.
na ihe osise nke Canova na Bernini ha bụ pearl ebe a na ebe a. N'ezie, emela njem nleta ahụ n'abalị, ị ga-edebe Ọfọn, enwere ọtụtụ ndị ọbịa. Enwere ike ime ndoputa a na ntanetị ma ọ bụ site na ekwentị na ọtụtụ ụbọchị tupu oge. Ogige Borghese na-emeghe Tuesday site na Sunday site na 8: 30 ruo 7: 30 na ọ dị euro 20.
E wezụga ọdịnaya ya, ụlọ ahụ n'onwe ya kwesịrị ileba anya na ya. Onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ aha ya bụ Flaminio Ponzio mere ya ka ọ bụrụ kadinal si suburban villa. Mgbe ọ nwụrụ, Vasanzio nọgidere na-arụ ọrụ ahụ bụ onye gbakwunyere ihe ịchọ mma na nhazi mbụ. N'oge ahụ ọ bụ ebe ntụrụndụ mara mma, nke nwere iyi, ọdọ mmiri, ije, ekwuru ụlọ, enyí nnụnụ ...
Buildingslọ ndị ọzọ ị nwere ike ịhụ bụ Meridiana, cha cha del delzizi, the cha cha dell'Orologio, the Casino Nobile or the Portezzuola, for example. Ha bụ ihe akụkọ ihe mere eme na anyị nwere ike itinye Casa Giustiniani, Pajarería ma ọ bụ Solar Clock na ubi nzuzo ya.
Nke ahụ bụ eziokwu, ụlọ ndị a nwere ọmarịcha obere ubi ha. Themfọdụ n’ime ha bụ ndị ahụ e kwuru n’elu Ubi Nzuzokamakwa ndị Ndagwurugwu unere, Ogige Plazoleta nke Scipione Borghese ma ọ bụ mara mma Ogige Ubi ya na Templelọ Nsọ Aesculapius mara mma. Nke ikpeazụ bụ otu n'ime ụlọ ndị neoclassical na narị afọ nke XNUMX n'obodo ahụ, dị ka Orologio, Casa del Reloj ma ọ bụ Prqueña Fortaleza.
Ha tinye dị iche iche dị ka Fontana dei Cavalli Marini, Fontana del Fiocco, Ọchịchịrị Ọchịchịrị ma ọ bụ Fontana dei Pupazzi. Enwekwara Canonica Museum, nke bụ ụlọ studio nke Pietro Canonica, onye na-ese ihe, oflọ Roses ma ọ bụ oflọ Cinema. Ọ bụrụ na gị na ụmụaka gaa, ị nwere ike ịga leta Raffaello House, ya na ụmụaka ji egwu egwuregwu, maọbụ ọ bụrụ na ịmasị ụmụ anụmanụ, enwere Rome Zoo ma ọ bụ Bioparco nwere ihe karịrị otu puku anụmanụ nke ụdị 200 dị iche iche. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ezumike kacha ibu na oldesttali, nke amụrụ na 1911.
Ọ na-emepe n’afọ niile, ụbọchị asaa n’izu ma ewezuga Disemba 25 na awa ndị ọzọ ga - amalite 9:30 nke ụtụtụ. Ntinye na-akwụ euro 16 kwa okenye. Nwere ike ịzụta tiketi n'ịntanetị. N'aka nke ọzọ, ihe nkiri kachasị dị mkpa bụ Elekere Mmiri Pincio, ihe ebube dị na nkà na ụzụ nke narị afọ nke XNUMX.
Ọ bụ hydro-elekere nke ahụ wuru na 1867 nke onye ụkọchukwu Dominican hụrụ n'anya na -emepụta, Giambattista Embriaco, tinyere onye Switzerland nke na-ese ụkpụrụ ụlọ bụ Joarchim Ersoch. Ihe ịtụnanya bụ na ka nọ n'ọrụ zuru oke ebe ọ bụ na ya ngosi na ama Universal Exposition na Paris na 1867.
Ga-ahụkwa oyiri nke Shakespeare's Globe Theater na London, Silvano Toti Globe aterlọ ihe nkiri, nnukwu pavilvil nke ọma sitere na oge Elizabethan, ọtụtụ ụlọ nsọ na pavil, ogige na isi iyi. O doro anya, echere m na ihe kachasị njem ahụ ga-abụ ogige Pincio ebe ọ bụ na ebe a ị nwere echiche magburu onwe ya nke obodo Rome.
Cheta na Villa Borghese nwere ọnụ ụzọ mbata itoolu dị n'etiti Via Pinciana, Raimondi, Aldrovandi, Piazzale San Paolo del Brasile, Piazzale Flaminio na Piazzale Cervantes. Tụgharịa!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Rome » A ije site na Villa Borghese